Entsha 'yokuGuqula okungalunganga' Ikliphu yeMiboniso bhanyabhanya ebonisa ukuGawula okuKhulu ngokuThoba iiHikers
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo Entsha 'yokuGuqula okungalunganga' Ikliphu yeMiboniso bhanyabhanya ebonisa ukuGawula okuKhulu ngokuThoba iiHikers
Iindaba ezothusayo zoLonwabobhanya
ibhalwe ngu UTimothy Rawles January 9, 2021
Ukujika okungalunganga: Isiseko Ukhuphe ikliphu yokujonga kuqala kule veki iphelileyo. Ngoku kunesihloko Ukujoka kwindawo engeyiyo Iimbalasane zebhanyabhanya uMateyu Modine, uCharlotte Vega, noBill Sage; icwangciselwe ukukhutshwa kwiithiyetha (kunye ne-VOD engathintelwanga) ubusuku obunye kuphela ngoJanuwari 26.
Ikliphu yi-IGN ekhethekileyo kwaye ikhupha ukukhanya okuncinci kubalinganiswa abancinci abaye balahleka emahlathini kwaye balandelwa liqela leentaba ze-cannibalistic. Umyili woluhlu u-Alan B. McElroy ubuyile wazokuloba le-equel ngelixa uMike P. Nelson (AbendluUyalathisa.
Iklip engezantsi iseta ibali elibonisa iqela labahlobo abahamba behla ngendlela yeAppalachian Trail. Ngaphandle kwendawo, isiqu somthi omkhulu siyakhululwa kwaye siqala ukuqengqeleka emva kwabo njengesixhobo sokuhambisa umbane wamandulo. Njengokuba bebaleka umgibe, omnye umfana (uVardaan Arora) uxhaswe emthini njengoko ilog engalawulekiyo isondela kuye, iphakamisa ukubhubha kwakhe kwegazi.
I-franchise, eyaqala ngo-2003, iye (kwada kwangoku) ngokulandelelana ezintlanu, nganye inamaqondo ahlukeneyo okugxeka. Kakhulu, abalandeli benyanisekile kwinkwenkwezi yokuqala u-Eliza Dushku noDesmond Harrington. Ukuncamela Okokugqibela yayikukungenela kokugqibela kuthotho umva ngo-2014. Ukuqalisa kwakhona kwaqala ukufota ngo-Septemba ngo-2019 kanye phambi kwesi sifo.
Njengoko ii-slashers zemigibe zihamba, i Ukujoka kwindawo engeyiyo I-franchise yaqala ngamandla. Nangona umxholo ubolekwe kwamanye amabali amabali, abalandeli aboyikisayo bachukunyiswa kukubulala kunye nomgangatho wemveliso. Kwiimiboniso bhanyabhanya zamva nje, izidla-bantu, nganye yazo inesimbo sayo sokubulala yaba zizikhumbuzo zeemovie ezingalibalekiyo ezandisa ubomi belo lungelo
Oku kutshanje Buyani kuza ngexesha apho abalandeli aboyikisayo benxanelwe ifilimu eyenziwe ngestudiyo emva kokonwabela ukubulawa kweemovie ezothusayo ezimeleyo ngelixa uvalelwe ekhaya. Indlu yokuvelisa yaseJamani uConstantin bhanya bhanya evelisiweyo Ukujoka kwindawo engeyiyo kunye noSaban ngokuchola amalungelo okusasaza eMntla Melika ngasekupheleni konyaka ophelileyo.
Ukujoka kwindawo engeyiyo iya kukhulula ubusuku obunye kwimidlalo yeqonga, kunye ne-VOD, nge-26 kaJan.
Ukujoka kwindawo engeyiyoUkujika okungalunganga: Irizothi yokugqibela
'Ukujika okungalunganga' Ukuqalisa kwakhona ngobunye ubusuku kuphela kuluhlu lweetikiti oluphezulu
UPHONONONGO: Imifanekiso yamahlaya '' Indoda yeCream Cream 'ikhethwe ngokufanelekileyo